Gargaarsi Namoomaa Tigraay Danqamuun Uummata Beelaaf Saaxiluu Mala: Tokkummaa Mootummootaa
Caamsaa 21, 2021
Konkolaattota Tokkummaa mootummootaa, Tigraay naannoo Aguwaalaa, Caamsaa 8, 2021
WAASHINGITAN, DIISII —
Konkolaataan gargaarsa fe’an akka hin sochoone dhorkamuu fi konkolaataawwan naannoo walitti bu’iinsi jirutti ergaman qabamuun gargaarsa namoomaa Tigraay keessaaf daandii argachuun rakkisaa ta’ee jira. Keellaaleen sakatta’aa kan waraanaa konkolaataawwan gargaarsaa akkaan kan sakatta’anii fi yeroo mara eeyamaa fi angawoota naannoo ykn waaltaa ajajaa gama kaabaa biraa mirganuu qabaachuu gaafatu.
Gareeleen michoota ta’an kanneen gargaarsa midhaan nyaataa raabsan, yoo xiqqaate aanaalee 25 dhaqqabuuf rakkisaa ta’uu ibsanii jiran. Sababaa walitti bu’iinsa jiruun hanga ammaatti ummanni miliyoona lamaa ol ta’u qe’ee ofii irraa yoo godaanu, erga baatii Bitootessaa qabee uummata miliyoona 5.2 kanneen gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu keessaa uummata miliyoona 1.8 qofaa dhaqqabuun danda’ame.
Yunaayitid Isteetis uummata kana deggeruuf doolaara $853 hanga xumura waggaa kanaatti gumachuuf kan jirtu yoo ta’u hanga xumjra baatii Adoolessaatti doolaara miliyoona $200 kenniti jedhamee eegama.
Caamsaa 10 gaanfa Afriikaatti jila addaa Yunaayitid Isteetis ennaa Itiyoopiyaa daawwatan mootummaa, tokkummaa mootummootaa fi angawoota gamtaa Afriikaa fi qaamotii siyaasaa, dhaabolii gargaarsaa waliin mari’atanii jiru.
Prezidaantii Eertraa Isaayaas Afewerqii waliin illee Asmaraa keessatti wal arguu dhaan loltoonni Eetraa battala Itiyoopiyaa keessaa ba’uun barbaachisaa akka ta’e cimsanii yaadachiisaniiru.
Gama biraan Itti gaafatamtuun dhaaba gargaarsa misooma addunyaa kan Yunaayitid Isteetis Samaantahaa Power beela hamaa walitti bu’iinsi uumeen uummati Tigraay miliyoona sahanii ol ta’u gargaarsa namoomaa isa barbaachisa jedhan. Akeekkachiisi keenya jalqabaa akka mul’isutti gargaarsa midhaan nyaataa sadarkaa 5ffaa akka barbaachisu kan ibsu yoo ta’u kan kana irra caalu sadarkaa 6ffaan hin jiru waan ta’eef mootummaan Itiyoopiyaa lola dhaabsisuu dhaan hojjettoota gargaarsaaf daandii saaquu qaba jechuun akeekkachiisan.
Mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa jalqabuu isaa Dubbi Himaan TPLF ibse
Dubbii Himaan Antoniyoo Gutarrees Gargaarsa Itiyoophiyaa Keessaa Ilaalchisee Ibsa Kennan
Irreecha Finfinneetti Ayyaaneffamerratti Kanneen Mormii Dhagessisan “Ergamtoota Shanee ti’ Jedha Mootummaan
Tokkummaa Mootummootaa Angawoonni Isaa 7 Itiyoophiyaa Gadhiisanii Ba’uu Mirkaneesse
Kanaas caqasuu feeta ta'a
Hiriirri Mormii Waajjira VOA Fuulletti Geggeessame
Ministeerrii Itisaa Yunaayitid Isteetes gara Awurooppaa Imaluuf Jiru
Talaaliin Dhukuba busaa Afrikaa keessatti bu’aa agarsiisaa jira
Joo Bayiden fi Uhuuruu Keeniyaataa marii taasisan
Guddina Tiyaatira Itiyoophiyaa fi Gahee Oromootaa
Ba’iin Qorannoo Talaallii Kooviid-19 Ifa Ta’e